Ndekupi kwandinozotanga webhu yangu yepamusoro yeSeO kukurudzira kubva pakutanga?
Kune nzira dzakawanda dzakasiyana-siyana uye zvigadziriswa zvekupa peji yepaIndaneti nzvimbo yakarongwa mumatsva ekutsvaga kushandiswa neGoogle, pamwe chete nemamwe mabasa akadai sa Yahoo neBing. Kana iri yekutsvaga mhizha iyo pachayo, iri kutengesa pane zvakarongedzwa zvakarongeka, izvo zvisati zvambobudiswa kana kuti zvishoma nezvishoma zvakaziviswa nevakuru vayo. Tichifunga nezvekutsvakurudza kukuru, kuongororwa kunobatsira uye dzimwe shreds yeruzivo rwakagamuchirwa kubva kune vamwe vekare vashandi, zvose zvatinoziva kusvika zvino - Google's search ranking shanduro inosanganisira chimwe chinhu chemashoko makumi maviri ekutsvakurudza, kunyanya inotungamirirwa neushamwari-yakanaka yekutsvaga ruzivo, maererano nekuchengeta chinangwa chetsvaga yekutsvaga kwekunyorera zviri nani.
Sezvo pasina chirongwa chaicho chekuita kana nzira yekuzadzisa pamusoro pekutsvaga kweGoogle, pane nzira yakakwana uye yakapoteredza nzira yekuvandudza mapeji ewebhu. Iye zvino inozivikanwa seSearch Engine Optimization (SEO). Izwi rinoreva kuita zvinhu zvose zvakapoteredza chinangwa chimwechete - kukwira pamusoro pezita rekutsvaga injini mapeji (a. k. a. SERP). SEO inonyanya kuzivikanwa nemabasa ayo akaoma uye anowedzera nguva inodiwa kuti iite webhusaiti yakanyatsonaka - inobatsira chaizvo uye inopfuura yakanakisisa kune vapenyu vose vapenyu, pamwe chete nemafungiro akanaka ekutsvaga, zvakagadzirirwa zvakakwana nechenesheni uye yakagadzirwa seji peji kuitira inofadzwa nekutsvaga kutamba bots.
Uye iwe wakambofungidzira pfungwa yacho. Ini chete ndinoreva kuti zviri nyore kutaura pane kuzviita. Zvechokwadi. Asi, chero zvakadaro, chii chatingaita pamusoro pehutano hwako hweEOO kukurudzira, zvishoma kuti utange kufamba nenzira yakarurama? Ngatitangei kutarisa kwenguva pfupi patinogona kuvandudza webhu yako yepamusoro ne SEO. Panguva ino tichazotanga nedzimwe nheyo dzako pa-site.
Funga nezvehupenyu hwako sokunge uri kutaura kuti urarame vanhu uchiyeuka mupfungwa dzako kuti mapeji ako ewebhu anowanikwa zviri zviviri nevashandi chaivo, uye injini yekutsvaga kuburikidza nemashoko makuru kana mazwi mashoma. Nenzira iyo, kunyora zvinyorwa kunowedzera zvakaoma kupfuura zvingaita sepakutanga. Ichatsvaga simba rakawanda rokutungamira runyoro rwezvinyorwa zvitsva, kugadzira zvinyorwa zvakasiyana zvine ruzivo rwakakosha mazwi emashoko, zvichiri kutarisa zvakasikwa uye zvakasununguka kuverenga, asi kupa hurukuro yakawanda yekudzidzisa panguva imwecheteyo. Chimbofunga nezvazvo. Zvichida iwe unogona kushandisa nyanzvi yehupenyu kune rimwe rubatsiro. Icho chingava chisarudzo chakaumbwa zvakanaka.
Links uye Social Media
Chivakwa chekugadzira ingangodaro chinonyanya kukosha mubasa rese rekushanda reSeO kukurudzira. Ichokwadi, inoshanda chaizvo chaizvo - Google iri kutarisa zvese zvinosangana, zvose zvinotarisana nemapeji ako uye zvinotungamirira kubva pawebsite yako. Asi nyaya yekubatana kwakanaka uye hukama huri nani paHuman Media neMusika huchiri chinhu chisingatauriki. Vose maverengero avo uye unhu hunokosha. Kana chimwe chinhu kune icho? Izvo zvose zvese zvinoshandiswa zvinofanira kunge zvakasikwa uye zvakasikwa here? Zvakadini kana tikashandisa dzimwe script kana kuti tishandise zvikwereti zvakabhadharwa muzhinji? Chero chipi zvacho chaunogona kusarudza pane izvozvo, asi ndinotenda kuti chero upi noupi unoshandisa zvisina kunaka kana kushandiswa navo huchaguma nechinzvimbo chakaderera muSERPs, saka kuita zvose zvatiri kuita pa web rank SEO kukurumidza nyore kuchinja Source .